एसेज शिरिजमा इङ्ल्याण्ड पत्तासाफ, अष्ट्रेलिया ४-० ले बिजयी | TajaKhabarTV
एसेज शिरिजमा इङ्ल्याण्ड पत्तासाफ, अष्ट्रेलिया ४-० ले बिजयी
२०७४, २४ पुष सोमबार ११:०१ January 8, 2018 ताजा खबरFeatured, क्रिकेट
सिड्नी : एसेज सिरिज अस्ट्रेलियाले ४–० ले जितेको छ। अन्तिम तथा पाँचौ टेस्टमा अस्ट्रेलियाले इंग्ल्यान्डलाई इनिङ र १ सय २३ रनले पराजित गर्दै सिरिजमा सानदार जित हात पारेको हो।
यो पनि पढ्नुहोस् : मैदानमा आफ्नै टिमका ब्याट्सम्यानले खुशी मनाइरहँदा ड्रेसिङ रुममा कप्तान निराश ! कारण यस्तो
दोस्रो इनिङमा इंग्ल्यान्ड १ सय ८० रनमै अलआउट भएपछि सिरिज अस्ट्रेलियाले कब्जा गरेको हो। इंग्ल्यान्डलाई रोक्न अस्ट्रेलियाका लागि पाट कमिङ्ग्सले ४ विकेट लिए।
यो पनि पढ्नुहोस् : गर्ल्स होस्टलभित्र केटीहरुले यसरी धुमै मच्चाउछन्, यस्तोसम्म गर्दा रहेछ
इंग्ल्यान्डका लागि कप्तान जोए रुट ५८ रनमा रिटायर्ड हर्ट हुँदै मैदान छाडेका थिए। इंग्ल्यान्डका अलास्टयर कुकले १० रन जोड्दा मार्क स्टोनम्यान शून्य रनमा आउट भए। जेस्स भिन्सले १८ र डविड मालन ५ रनमा पेभेलियन फर्के।
यो पनि पढ्नुहोस् : आर्सनलको लज्जास्पद हार, एफए कपबाट बाहिरियो
पहिलो इनिङमा इंग्ल्यान्ड ३ सय ४६ रनमा अलआउट हुँदा अस्ट्रेलियाले ७ विकेटको क्षतिमा ६ सय ४९ रन जोडेर इनिङ समाप्तीको घोषणा गरेको थियो। अस्ट्रेलियाका लागि तीन ब्याट्सम्यानले शतक प्रहार गरे। तेस्रो दिन उस्मान खवाजाले शतक प्रहार गरेका थिए। उनले १ सय ७१ रन जोडे। चौथौ दिन मिचेल र साउन मार्स दाजुभाइले शतक प्रहार गरे। साउनले १ सय ५६ रन जोडे। मिचेलले १ सय १ रनको योगदान दिए। बलिङतर्फ इंग्ल्यान्डका मोइन अलीले २ विकेट लिए।
यो पनि पढ्नुहोस् : होटलबाट आपतिजनक अवस्थामा दिउसै छ जोडी पक्राउ, को को परे ?
इंग्ल्यान्डका लागि जोए रुटले ८३ र डविड मालनले ६२ रनको योगदान दिएका थिए। बलिङतर्फ पाट कमिङग्सले ४ विकेट लिँदा मिचेल मार्स र जोस हजलउडले २–२ विकेट हात पारे। कमिङग्स खेलको म्यान अफ दि म्याच हुँदा कप्तान स्टेभिन स्मिथ म्यान अफ दि सिरिज घोषित भए।
यो पनि पढ्नुहोस् : केटालाई कसरी केटी बनाइन्छ ? यसरी हुन्छ लिंग परिवर्तन (भिडियो हेर्नुहोस )
यसअघि लगातार तीन टेस्टमा जित निकालेको अस्ट्रेलियाले सिरिज यसअघि नै कब्जा गरिसकेको थियो। चौथो खेलमा बराबरीमा सकिएकाले अस्ट्रेलियाले क्लिनसिप गर्न सकेन।